I-15 yeeScholarship eziPhambili zePostgraduate eNigeria
Kule nqaku, uya kufumana uluhlu lwezona zifundo eziphambili ze-postgraduate eNigeria ezivulekileyo zokufumana isicelo samahhala kubo bonke abafundi baseNigeria abanokuthi bafumane ubuncinane i-bachelor degree kwi-yunivesithi yaseNigeria eyaziwayo.
Ukuphishekela izifundo zasemva kwesidanga eNigeria kunokuba yinto eyothusayo ndiyazi, kodwa uyazi ukuba kukho inani elilungileyo lamathuba emfundo yokuthweswa isidanga ngaphandle apho onokuthi uxhamle kuwo njengomfundi waseNigeria?
Kutheni uchitha ixesha xa usenza esona sixhobo sisezandleni zakho ukujonga ezi mfundo kwaye uzivavanye.
Into enomdla kukuba, ezinye zezi nkxaso-mali zibonelela ngenkxaso mali exhaswa ngokupheleleyo kubaxhamli babo. Thatha ixesha lakho lokufunda kude kube sekupheleni ngayo yonke into ethembisa ukuyinika.
Okwangoku, jonga itafile yemixholo apha ngezantsi ukujonga konke esinako kweli nqaku.
1 Ngoobani abaxhasi bezifundo zokuthweswa isidanga eNigeria?
2 I-Postgraduate Scholarship eNigeria
2.1 Isidanga sokuqala eNigeria Scholarship
2.2 INigeria i-LNG ye-Overseas Postgraduate Scholarship yaBafundi baseNigeria
2.3 I-NITDA i-Postgraduate Scholarships kubafundi baseNigeria
2.4 I-AGIP yokuthweswa isidanga kwabafundi baseNigeria
2.5 I-Heinrich Boll Foundation I-Postgraduate Scholarships kubantu baseNigeria
2.6 Amabhaso e-BEA amaNigeriya
2.7 I-SEOF Scholarship yaBafundi beNqanaba lokugqibela eNigeria
2.8 I-PTDF yezifundo zesidanga sokuqala
2.9 Urhulumente wase-Nigeria wase-Nigeria
2.10 Inkqubo yabafundi beShell SPDC
2.11 Inkqubo yeSAHARA yeQela leQhina lokuNcamathisela iMizi-mveliso
2.12 IYunivesithi yaseDundee Petroleum Technology Development Fund (PTDF) Scholarship
2.13 Inkqubo yoPhuculo lweMTN yeHlabathi yaBafundi abaDala
2.14 Inkqubo yoQeqeshiso lweRainoil kunye neRhasi yeNkampani yabafundi baseNigeria
2.15 UDkt. Murtala Muhammed Scholarship
2.17 I ngcebiso
Ngoobani abaxhasi bezifundo zokuthweswa isidanga eNigeria?
Ezi zifundo zesidanga sokuqala eNigeria zixhaswe liqela leearhente. Ezinye zazo ziiarhente zikarhulumente ngelixa ezinye ziiarhente ezingezizo ezaseburhulumenteni. Le mithombo ilandelayo inceda abafundi baseNigeria kumazwe asaphuhlayo ukuba baqhubeke nezifundo zabo zesidanga sokuqala.
I-Federal Government scholarships kubafundi baseNigeria
URhulumente kaRhulumente ufundela abafundi baseNigeria
Iinkampani zeoyile zokufunda zabafundi baseNigeria
Abanye abaxhasi njengeeNGO
Izifundo zokuthweswa isidanga kwabafundi eNigeria
I-Postgraduate Scholarship eNigeria
Apha kweli nqaku, uza kufumana ezinye zeengcali eziphezulu ze-postgraduate eNigeria onokufaka isicelo kunye nendlela yokwenza ngayo. Thatha ixesha lakho lokufunda.
Isidanga sokuqala eNigeria Scholarship
I-NITDA i-Postgraduate Scholarships
INigeria i-LNG ye-Overseas Postgraduate Scholarship yaBafundi baseNigeria
I-AGIP yokuthweswa isidanga kwabafundi baseNigeria
Inkqubo yaseStanbic IBTC Bank yoQeqesho lwabaFundi
I-Heinrich Boll Foundation I-Postgraduate Scholarships kubantu baseNigeria
Amabhaso e-BEA amaNigeriya
I-SEOF Scholarship yaBafundi beNqanaba lokugqibela eNigeria
I-PTDF yezifundo zesidanga sokuqala
Urhulumente waseGermany waseNigeria uScholarship
Inkqubo yabafundi beShell SPDC
INkqubo yokuNcamathisela iMizi-mveliso yaseSahara yeQela
IYunivesithi yaseDundee Petroleum Technology Development Fund (PTDF) Scholarship yaBafundi baseNigeria
Inkqubo yoPhuculo lweMTN yeHlabathi yaBafundi abaDala
Inkqubo yoQeqeshiso lweRainoil kunye neRhasi yeNkampani yabafundi baseNigeria
Ngezizathu ezithile, kukho abafundi abaphumeleleyo abanotyekelo lokuphuma kwiinkqubo zabo zokuthweswa izidanga ngenxa yezizathu ezingaphaya kolawulo lwabo kwaye esinye sezizathu zinokuba kukunqongophala kwemali yokuhlawula amanye amatyala kwaye kukunceda abafundi abanjengaba bafundele INigeria isekiwe.
Ke, le postgraduate yaseNigeria Scholarship iyafumaneka kubafakizicelo abasisigxina abanokuba ngabemi baseNigeria okanye bahlala eNigeria ngexesha lenkqubo.
Okungakumbi, le nkqubo iqinisekisa ukuba iyabaxhasa abafundi ukuba benze imisebenzi enempumelelo kwihlabathi liphela.
Ukuze ufaneleke kule nkxaso-mali, kuya kufuneka ukuba ufumane ukwamkelwa okwethutyana kwikhosi efanelekileyo yokuthweswa isidanga kwiYunivesithi yaseStirling.
Inikezela nge- $ 4,000 yokuxolelwa kwezifundo kwabafundi abanethamsanqa.
Unokufaka isicelo apha.
Le yenye yezona ndawo zidumileyo zokufunda eNigeria ekhuthaza ukugqwesa kwizifundo kwaye ixhasa uphuhliso lwabasebenzi kweli lizwe.
Ukuba ungomnye ofundileyo kwezi zifundo: Izifundo ngendalo esingqongileyo, Ubunjineli, uLawulo, iAccounting, Economics, Geology, Law, kunye noNyango.
Ke, kuya kufuneka ubambe lonke ithuba onalo lokufaka isicelo soku ngekhonkco elingezantsi.
I-NITDA i-Postgraduate Scholarships kubafundi baseNigeria
I-NITDA i-postgraduate scholarship eNigeria inikezela abafundi abafundi ukuba baphumelele kwiiyunivesithi zaseNigeria. Kuboshwe uxanduva lokuhlaziya ubume be-IT yaseNigeria kunye nokuphakamisa umgangatho wakhe kwinqanaba lehlabathi.
Ukulungela le mfundo, kuya kufuneka uphumelele kuvavanyo lokufaneleka emva kokuba uza kudweliswa kuluhlu olufutshane.
Kuphela ngabahlohli beDyunivesithi kunye nePolytechnic abane-MSc kuyo nayiphi na intsimi enxulumene neTekhnoloji yoLwazi abakulungeleyo ukufaka isicelo sale mali yokufunda.
Kwakhona, abaphathi beklasi yokuqala okanye yesibini kwiTekhnoloji yoLwazi kunye noMthetho banokufaka isicelo sokuya kwinkqubo yenkosi yabo.
Ukuba kufanelekile kwaye unomdla, faka isicelo sale bhasari ngekhonkco elingezantsi.
Unokufaka isicelo apha
Le ngxowa-mali ixhaswe yiAgip Exploration Limited kwaye yenye yezona mfundo zibalaseleyo zokufunda eNigeria ngoku. Njengenxalenye yoXanduva lweNtlalo yoXanduva (CSR), ibona ukulungiswa kunye nokuqhubela phambili kwezabasebenzi.
Ngokuvumelana noku, i-NAE yamkela izicelo ezivela kubantu abaneziqinisekiso ezifanelekileyo nabanomdla kwi-alumni yaseNigeria kwiSikimu sePost Graduate Scholarship Award Scheme.
Esi sibonelelo sokuthweswa isidanga sinikezelwa kubantu baseNigeria abaphishekela izifundo zabo zesidanga sokuqala kwiiDyunivesithi zesayensi esetyenzisiweyo ('Fachhochschulen'), okanye iiDyunivesithi zobugcisa ('Kunsthochschulen') eJamani.
Sisibonelelo sonyaka kwaye ke, abaxhamli kufuneka bagcine irekhodi elungileyo lezemfundo, kufuneka babandakanyeke kwezopolitiko nakwezentlalo, kwaye babe nomdla kwiinjongo ezibalulekileyo zeli ziko ezizezi: Inkqubo yemithetho kunye namalungelo oluntu.
Cofa kwikhonkco elingezantsi ukuze ufake isicelo kwaye ume ukuze ufaneleke njengomxhamli.
Amabhaso e-BEA ubonelela ngezona nkxaso-mali zibalaseleyo kwizifundo zaseNigeria zabafundi zokufunda phesheya.
Ngaba uhlala unqwenela ukuqhubela phambili nezifundo zakho phesheya kodwa uqhubeka ujongene nezinto ezininzi ezinomda?
I-Ofisi yoMphathiswa Wezemfundo ibone kufanelekile ukuba ithathele ingqalelo abantu baseNigeri abafanelekileyo kwiSivumelwano semfundo seBilateral ukuze bafunde phesheya.
Izikhokelo zento ekufuneka ubenayo zikwikhonkco elinikezwe ngezantsi. Ke ngoko, nqakraza ngobubele kwaye ufunde.
Unokufumana yonke into oyifunayo malunga ne I-BEA Scholarship apha.
USir Emeka Offor uyasibona isidingo semfundo kwaye kutheni kufuneka etyale imali kuyo. Unika ibhaso lonyaka kubantu abancinci baseNigeria abaswele kakhulu ukuya kwiinkqubo zabo zesidanga sokuqala.
Nangona isifundi se-SEOF singasikelwanga mva nje kwizidanga zokuqala, kukho izibonelelo zabafundi abaphantsi kwabafundi.
Ikhonkco elingezantsi liya kusebenza ngakumbi njengesikhokelo sesicelo.
Kuyabonakala ukuba, le yenye yezona zinto zixhaswa ngesisa kwizidanga zokuqala eNigeria. Mhlawumbi ujonge ithuba lenkqubo yenkosi, oku kuya kulunga kakhulu.
Kuya kufuneka uhambe ngale khonkco ikhethekileyo ukuze ubone ukuba ukulungele na ukufumana izifundiswa. Kungenxa yokuba ukukhawuleza kwayo kugqithisile kwaye kuthatha umntu ukuba abe nokuma okungaphezulu kokufunda ukuze kuqwalaselwe.
Unokufaka isicelo sokufunda ngokuchofoza kwikhonkco elingezantsi.
Urhulumente wase-Nigeria wase-Nigeria
Urhulumente waseNigeria nge-Ofisi yoMphathiswa Wezemfundo kunye IBhodi yeScholarship Board unikezela le ngxowa-mali njengenye yeengcali eziphezulu ze-postgraduate eNigeria ukunceda abafundi ukuba bahambe kwiiprogram zabo ezikhethiweyo ze-postgraduate ngaphandle kwendlela yokuthintela.
Nangona kunjalo, le mfundo yokufunda ayikhawulelwanga kwinqanaba lokuthweswa isidanga. Iyadlulela nakwinqanaba le-NCE, i-HND, kunye negraduate.
Le SHELL SPDC yezifundo zokuthweswa isidanga yenye yezona zifundo zibalaseleyo zokuthweswa isidanga eNigeria egxile ngakumbi kubafundi bommandla waseNiger Delta kwaye unakekela izifundo zasekhaya nezamazwe aphesheya.
Ngaphandle koku, abagqwesileyo banokuba ngabaxhamli njengoko i-SPDC ibonelela malunga ne-20 yophando olwenziwa minyaka le.
Inkqubo yeSAHARA yeQela leQhina lokuNcamathisela iMizi-mveliso
I-Egbin Power Plc ime njengenye yeempumelelo ezinkulu kumzi mveliso wamandla waseNigeria. Umongo wale nkqubo kukukhokela intshukumo 'yokukhanyisa iNigeria' kwaye ikhule iye kweminye imimandla ese-Afrika esemaZantsi eSahara.
Ukulungela le nkqubo yoqeqesho lwabafundi abaphumeleleyo, kufuneka:
Ukufumana ubuncinci beCandelo lesiBini eliPhakamileyo okanye iCandelo eliPhezulu ngexesha lokufaka isicelo sokubekwa.
Ukubuyela kwimfundo ngokusisigxina wakugqiba inkqubo
Yiba nesidanga kwezi nkalo zilandelayo: Ubunjineli, iSayensi yezoShishino, iZimali, uLwazi kunye neTekhnoloji, kunye noKhuseleko lweNdalo.
Kuphela ngabantu baseNigeria kwaye baya kubanjelwa eNigeria. Ukuthatha inxaxheba kule nkqubo kukubonelela ngolwazi lobuchwephesha lokusebenzisa oko ukufundisiweyo kwizifundo zakho zesidanga sokuqala.
Kwakhona, ukubakho kothethathethwano lomntu ngamnye kunye neengcali ezahlukeneyo zikunika uncedo onokulufuna malunga nezifundo zakho. Le nkqubo imfutshane kwaye ithatha malunga ne-3-6 ukuyigqiba.
IYunivesithi yaseDundee Petroleum Technology Development Fund (PTDF) Scholarship
Le ngxowa-mali ijonge abafundi baseNigeriya abaqondakalayo abafuna ukuya kwizifundo zabo zesidanga sokuqala kwinqanaba lenkosi okanye le-PhD.
Amacandelo afanelekileyo okufunda kubandakanya Ubunjineli Bombutho, Ubunjineli Bombane, Amandla ePetroleum kunye noMthetho wezeMaminerali kunye noMgaqo-nkqubo, iJografi / iNzululwazi yeNdalo, ubuNjineli boMatshini.
Kuyanceda ukukhathalela iifizi zokufunda kunye neendleko zokuphila.
Ukufunda ngakumbi ngendlela yokufanelekela kwaye ufake isicelo sale mali yokufunda, jonga ikhonkco elingezantsi.
Cofa apha ukuze ufumane iinkcukacha zokufunda
Uthungelwano olukhula ngokukhawuleza kunxibelelwano ngomnxeba luthatha inani labafundi abaselula abaphumelele eNigeria ukuze baqeqeshe kwaye babhalise njengenxalenye yeqela lakhe.
Ke, ukuba unomdla ngomsebenzi wakho, umncinci kwaye uphakathi kweminyaka engama-22 ukuya kwengama-26, kuya kufuneka ube yinxalenye yabambalwa abakhethiweyo abane-drive efunekayo yi-MTN.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuya kufuneka uyigqibile inkqubo yakho yesidanga sokuqala kwaye kufuneka ufake isicelo ngale khonkco.
Abaphumeleleyo abaphumeleleyo eNigeria abenza umgaqo weRainoil kunye neGesi yenkqubo yabo yokuqeqesha abo baphumeleleyo kunye nokuma okuhle kwezemfundo kufuneka badlule kwikhonkco elingezantsi kwaye bafake izicelo.
Usenokuzibuza ukuba kutheni le nto ibandakanyiwe kuluhlu lweyona mfundo ibalaseleyo yezifundo zabafundi baseNigeria. Ewe kungenxa yokuba iRainoil yenye yeenkampani zokuthengisa ioyile eNigeria.
UDkt. Murtala Muhammed Scholarship
Ngaba uyazi ukuba unyaka nonyaka omnye umfundi waseNigeria ufumana isidanga sokuqala kwisidima sika-General Murtala Muhammed?
Ke, le mfundo ixhaswe ngokupheleleyo yiLondon Metropolitan University kwaye igubungela iindleko zokufunda ngenkqubo ye-Master kwiziko lemfundo ephezulu.
Oku ngakumbi kubafundi baseNigeria abanqwenela ukufundisisa e-UK.
Ngenxa yezithintelo, umntu usenokungaziqhubekeli nezifundo zakhe, ngakumbi emva kwenkqubo yesidanga sokuqala. Into ongayaziyo kukuba kukho amathuba okufunda kwabafundi baseNigeria abanokuthi bakhathalele izifundo zakho, indawo yokuhlala kunye neendleko zokufunda.
Ngelixa ezinye zezifundo zokuthweswa isidanga eNigeria ezidweliswe kweli nqaku zenkqubo yenkosi, inani elilungileyo, nangona kunjalo, lele Ph.D. iinkqubo.
Ukuba ulungele iimfuno, unokuzenzela okuhle ukufaka isicelo esifanayo. Umnqweno omhle!
Isiseko seMTN seSidanga sokuqala seNigeriya
I-DRM Scholarship yamaNigeria
I-ExxonMobil Scholarship yaBafundi beNigerian
I-Agbami Scholarship yaBafundi baseNigeria
Uluhlu lweeNyuvesi zasimahla eCanada zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Iikhosi zeStanford zasimahla kwi-Intanethi ezineZatifikethi
Ufumana njani iScholarship eCanada yaBafundi baseKhaya naabaFundi beHlabathi
Funda eCanada nge-IELTS
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zasimahla eCanada
Ukufundiswa kweNigerian Scholarship Postgraduate
Izifundo zaseNigeriaUlwabiwo-mali kwabaseNigeria
Post Previous:Iiyunivesithi zoNyango ze-13 e-Australia zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Okulandelayo Post:I-11 yeeSayensi zoNyango eziGqwesileyo eCanada zaBafundi beZizwe
Pingback: IYunivesithi yase-Abuja iikhosi kunye neMark zabo zokuQhawulwa kwe-2022